ko htike's prosaic collection: အရူးကြီးသန်းရွှေရဲ့ မတရားသူကြီးအဖွဲ့
Posted by ကိုထိုက် at 00:47
All Burmese people ( including media ),
I think it's very inportant to let the world community and our people know this previously scripted verdict as soon as possible so that, if it comes true, the cunning nature of Than Shwe should be already revealed. Furturemore, this early revelation might prevent that kind of verdict.
Thank you Ko Htike. Carry on!
စစ်အစိုးရလူများနှင့် မတရားသူကြီးများ။ ဥပဒေအကြံပေးနှင့်မိသားစုများကို ယနေ့မှစ၍ လက်တုန်`့ပြန်မည်ဟု ကြေငြာလိုက်သည်.....
ဒီလူတွေရဲ့ နာမည်တွေကို စနစ်တကျသာ မှတ်တမ်းတင် ထားလိုက်ပါ။ တချိန်မှာ ဂဠုန်ဦးစောတို့လိုပြည်သူတရပ်လုံးကရွံရှာရမယ့် လူတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
ဆရာတော်ဦးဇောတ်က web ဘင်လို့ဝင်လာတာ......
စောက်ရုးတွေ ရေးတဲ. web ကိုး......